प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल विस्तार, क-कसको कुन मन्त्रालय खोसियो ? — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल विस्तार, क-कसको कुन मन्त्रालय खोसियो ?
काठमाडौं । दोस्रो पटक संसद विघटन गरेसँगै अलोकप्रिय बन्दै गएको कामचलाऊ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पाउने ८ मन्त्रालय टुंगिएसँगै तीन मन्त्री मन्त्रालयविहीन भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा नेताहरुबीच शुक्रबार भएको छलफलमा ८ मन्त्रालय टुंगिएको हो ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्रीमा जसपाका राजेन्द्र महतोसँगै अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेल र अर्का एमाले नेता रघुवीर महासेठलाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट स्रोतले बताएको छ ।
जसपा नेता महतो उपप्रधानमन्त्री भएपछि मधेसमा आफ्नो पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन लागिएको स्रोतको दावी छ । यसअघि ओली मन्त्रीपरिषद्मा महासेठ पत्नी जुली महतो मन्त्री थिइन् । स्थायी कमिटी सदस्य महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने भएपछि पार्टी उपमहासचिव अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्री बनाउने तयारी रहेको स्रोतको भनाई छ ।
‘विष्णु पौडेल र रघूवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । बाँकी मन्त्रीहरू पनि फेरिन सक्ने सम्भावना रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । त्यस्तै, केही मन्त्रीहरू पनि हेरफेर गरिन लागेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले आफ्नो सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
उनले आफूले पार्टी नछोडेको र ह्वीप पनि उल्लंघन नगरेको भन्दै विना आधार पार्टीले कारबाही गरेको भनी सांसद पद कायम राख्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् । उक्त रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले थापालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दिएपछि बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले थापा निष्कासनमा परेको जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि थापा सांसदबाट पदमुक्त भएका थिए ।